October 9, 2020 - Achawlaymyar
ဒီအိမ်မက်တွေ မက်တတ်ရင်သိမ်းထားပါ (က) မှ (မ) အထိ
October 9, 2020 by Achawlaymyar
(က) မှ (မ) ထိ [ က ] နှင့်ပက်သက်သော အိပ်မက်များ ၁။ ကြာမျိုးငါးပါးအနံ့ကို ရှုရသည်ဟု မြင်မက်မူ တည်ကြည့်စွာ ဂုဏ်သတင်းကျော်စောရအံ့ ၂။ ကြာညိုပန်းကို ပန်ရသည်ဟု မြင်မက်မူု မယားကောင်းရအံ့ ၃။ ကြာသွတ်အိုးနှင့် ရေချိုးရသည်ဟု မြင်မက်မူ သူတစ်ပါးတို့၏မှီခိုရာ ဖြစ်အံ့။ ကြာသွတ်အိုးမြင်မက်မူ စည်းစိမ်များအံ့ ၄။ ကြာပန်းစသည်မြင်မက်မူ ဖျားနာအံ့ ၅။ ကျွဲစီးရသည်ဟု မြင်မက်မူ ကျေးကျွန်ရအံ့ ၆။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ မြေခွေး၊ လင်းတ တိရစ္ဆာန်တို့ကို မြင်မက်မူ ဥပါဒ်ရောက်အံ့ ၇။ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ဆင်၊ မြင်းတို့အား ကောင်းသော အခြင်းအရာဖြင့် မြင်မက်မူ နတ်စိမ်းတို့ နှစ်သက်အံ့ … Read more
ရာသီသွေး အမျိုးအစားကနေသိနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ အများစုက ဓမ္မတာလာတဲ့ ကိစ္စကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမပြောတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရာသီသွေးအခြေအနေ တစ်ခုခုထူးခြားတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမှာလည်း သက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကို သတိပြု ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရာသီသွေးဆင်းတာဟာရှက်စရာမဟုတ်သလို ရာသီသွေးအမျိုးအစား အလိုက်သိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအကြောင်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပန်းရောင်သမ်းနေရင် ရာသီသွေးဟာပုံမှန်ဆင်းနေကျအရောင်ထက် သွေးအရောင်ဖျော့ပြီး ပန်းရောင်ဘက်သမ်းနေတယ် ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အမဟော်မုန်းနည်းလွန်းနေ တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ အဲဒီလို ရာသီသွေးပန်းရောင်သမ်းတာဟာ မကြာခဏဖြစ်တယ်၊ သွေးအရောင်ဟာသိသိသာသာဖျော့လာတယ် ဆိုရင် အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီသွေးကျဲလွန်းရင် သွေးအရောင်ဖျော့လွန်းပြီး ရာသီသွေးဟာခပ်ကျဲကျဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အာဟာရမမျှတဘူးဆိုတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီး သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိလို့ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းကြီး လည်းစိတ်မပူပါနဲ့၊ သားအိမ်ပြွန်ကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာဟာ တခြားသားဖွားမီးယပ်ကင် ဆာရောဂါတွေထက်စာရင် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ ၂ … Read more
အိမျထောငျမပွုဘဲ ကလေးရခငျြတယျလို့ ဖှငျ့ဟလာတဲ့ ဖူးပှငျ့သခငျ (ရုပျ/သံ)
အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ကလေးရချင်တယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် (ရုပ်/သံ) အသက် ၁၆နှစ်ထဲက အနုပညာလောက ထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးအနုပညာကို ချစ်လို့ ဇွဲမလျော့ပဲ အဆုံးထိ ဆက်လျှောက်မယ် ဆိုပြီး ရည်မှန်းချက်ပြင်းထန်တဲ့ သူပါ။ သူမကိုတော့ သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ မဂ္ဂဇင်းကာဗာတွေကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ ပိုသိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖူးပွင့်သခင်ကိုတော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေကနေတဆင့် ပရိသတ်တွေ စတင်သိရှိ လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အခုလက်ရှိမှာလည်း စီနီယာ အနုပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ အတူ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ ရိုက်ကူးနေရပါပြီ။ အရပ်လည်းမြင့်သလို ရုပ်ရည်ကလည်း ချောမောလှတဲ့ မင်းသမီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပါးချိုင့်လေးကြောင့်လည်း အပြုံး ချိုချိုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒီကနေ့မှာလည်း အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ အချစ်ရေးကို မေးမြန်းခဲ့ ရာမှာတော့ ချစ်သူတွေ ဘာတွေက … Read more
ဝက် သား ကို ဘယ် လောက် ကြိုက် ကြိုက် လုံး ဝ မ စား သင့် တဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း ( ၅ ) ခု…
ဝက် သား ကို ဘယ် လောက် ကြိုက် ကြိုက် လုံး ဝ မ စား သင့် တဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း ( ၅ ) ခု “ အ သီး မှာ သ ရက် ၊ အ သား မှာ ဝက် ၊ အ ရွက် မှာ လက် ဖက် ” ဆို ရိုး စ ကား အ တိုင်း ဝက် သား ဟာ လူ တွေ နေ့ စဉ် စား သုံး ကြ … Read more
ဘဝကို အပြျောရှငျဆုံး ဖွဈအောငျ တညျဆောကျနိုငျမယျ့ ဖူးစာဖကျဆိုတာ ဒီလိုမြိုးပါ…….
ဘဝကို အပျော်ရွှင်ဆုံး ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်နိုင်မယ့် ဖူးစာဖက်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ… ဖူးစာဆိုတာ ကိုယ့်နဲ့ သူ ဆုံဖို့ ဖန်လာတဲ့ ကံကြမ္မာတွေ ရှိတာကို ဆိုလိုကြတာပါ။ ဖူးစာဆိုတိုင်း လက်တွဲရတိုင်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရှိကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ ဖူးစာဖက်တွေကတော့ သက်သက် ရှိလို့ နေပါတယ်။ အမြဲ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ သူတွေဆိုတာ မရှိကြပေမယ့်လည်း အတူရှိနေတဲ့အခါမှာ ပျော်တဲ့အချိန်တွေ အများဆုံး ဖြစ်အောင် ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ စုံတွဲတွေမှာတော့ ဒီလို အချက်တွေ ရှိနေပါတယ်နော် ။ (၁) နားလည်မှု ရှိတယ် ။ နားလည်မှု မရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးက ပြဿနာတွေ များနေတတ် ပါတယ်။ သူ ဘာပဲလုပ်လုပ် ကိုယ် ဘာပဲလုပ်လုပ် နားလည်ပေးတတ်တဲ့ အသိ ရှိနေတာကလည်း … Read more
သနပျခါး ကွိုကျတဲ့ မိနျးခလေး တှေ သိထားသငျ့တဲ့ ဗဟုသုတ လေးပါ
မေမေ ပြောပြတဲ့ ပျိုမေ တို့အကြိုက် သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ် သနပ်ခါး ကျောက်ပြင် အသစ်ဆိုရေလေးဆေးလိုက်ပြီးသနပ်ခါး တုံးသွေးထည့်လိုက်တာပဲအဲသလိုလုပ်လို့မရပါဘူး ကျောက်သား အစစ်ကိုထွင်းထားတဲ့ ကျောက်ပျဉ် ဖြစ်ဖြစ် ဘိလပ်မြေ လိုမျိုးကိုပုံပြု့ထားတဲ့ကျောက်ပျဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသုံးမပြု့ခင်မှာဝယ်လာတဲ့ကျောက်ပျဉ် ကိုရေစင်စင်ဆေးပြီး ကျောက်ပျဉ် ကိုရေပုန်းထဲကိုထည့်ပြီးရေနဲ့တစ်ညစိမ်ထားပါနောက်တစ်ရက်မှာနနွန်းတက်နဲ့ဆီ+ဆားနဲ့ကိုသွေးပြီးတစ်နေကုန်နေလှမ်းထားရပါတယ် ဆီခြောက်တော့မှသနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကိုရေထပ်ဆေးပြီးမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သနပ်ခါးတုံး ကိုသွေးရပါတယ် ထွက်လာတဲ့ သနပ်ခါး ကလေးတွေကညက်နေပြီးတနေကုန်ပါးပြင်ပေါ်အရာထင်နေပါတယ်တဲ့ကဲ ကျောက်ပျဉ်အ သစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြု့ရသလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့ မေမေပြောပြတယ် ကျောက်ပျဉ် ပေါ်သနပ်ခါး သွေးတာ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုလုပ်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ ဒါပေမဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်ချသွေးရတာမဟုတ်ပဲမိမိခါးအလည်လောက်အမြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးသွေးရမယ်တဲ့ သနပ်ခါး ကိုအားစိုက်သွေးနေရတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတယ်လို့မထင်ရပေမယ့် နှစ်နဲ့ချီပြီးနေ့စဉ်သွေးနေရတော့လက်မောင်းကြွက်သွားတွေကပိုပြီးသန်မာတယ် ပျော့ပြီးရွဲကျခြင်းမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်ညာတော့လှည့်သွေးပေါ့တဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း တာလဲအတူတူပဲတဲ့ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ရေအိုး ရွက်တာပါတဲ့ မေမေ အမေ(အဖွား)ပြောပြတာလို့ပြောတယ် မိုးမခ ———————– မမေေ ပွောပွတဲ့ ပြိုမေ တို့အကွိုကျ သနပျခါး ကြောကျပဉျြ သနပျခါး ကြောကျပွငျ အသဈဆိုရလေေးဆေးလိုကျပွီးသနပျခါး … Read more
အပျိုဖော်ဝင်စ မိန်းခလေးငယ်လေးများကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်
အပျိုဖော်ဝင်စ လှသွေးကြွ အပျိုဖော်ဝင်စငယ်သွေးကြွလှပ ဆိုသောစကားသည် မိန်းခလေးတယောက်အပျိုစဖြစ်စတွင်လှပမူကိုတင်စားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းခလေးငယ်တစ်ယောက်အပျိုစဖြစ်စသော ကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲမူကို သိထားသင့်သောအချက်များကို OnDoctor တွင် အမေးများလေ့ရှိပါတယ်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်းမိမိသမီးငယ်ကို ပြောင်းလဲလာသောလူနေမူပတ်ဝန်းကျင်စိတ်မချမူကြောင့် အပျိုဖော်ဝင်သည့်အချက်များကို စောစီးစွာသတိထားသိချင်သောဆန္ဒကြောင့်မေးကြပါတယ်။ (1)အပျိုစဖြစ်သောအသက်အရွယ် မိန်းခလေးတစ်ယောက်အနေဖြင့် အသက် ၈နှစ်မှ ၁၃နှစ်ကြားအပျိုစဖြစ်ပါတယ်။ အဝလွန်သောမိန်းခလေးများ အပျိုစဖြစ်သောအသက်အရွယ်စောလေ့ရှိပြီး ပိန်သောမိန်းခလေးများသည် နောက်ကျလေ့ရှိပါတယ်။ အသက်၁၂နှစ်အရွယ်တွင် ရင်သားဖွံ့ဖြိုးမူမရှိဘဲ အသက်၁၅နှစ်ထိရာသီလာရန်နောက်ကျသည့်အခါ ဆရာဝန်နှင့်သေချာစမ်းသပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ (2)ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ အပျိုစဖြစ်ချိန်အတွင်းကိုယ်ခန္ဓာမှ ထွက်သောဟော်မုန်းကြောင့် သားဥအိမ်မှ အမျိုးသမီးဟောမုန်းအီစတိုဂျင်ထွက်ပါတယ်။ အဆိုပါဟော်မုန်းကြောင့် တဖြေးဖြေးအပျိုအဖြစ်စတင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဟော်မုန်းအတက်အကျပေါ်မူတည်ရ်ျလည်း အပျိုစဖြစ်စစိတ်အခြေအနေသည်လည်း အပြောင်းအလဲမြန်တတ်ပါတယ် (3)ဖွံ့ဖြိုးမူနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်း မိန်းခလေးအများစုရဲ့ဖွံ့ဖြိုးသည် တရှိန်ထိုးတိုးတက်ပြီး အစောပိုင်းတွင် ယောကျာင်္းလေးများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အလယ်တန်းကျောင်းတွင် မိန်းခလေးများသည်ယောကျာင်္းလေးများထက်အရပ်ပိုရှည်ပါတယ်။ မိန်းခလေးရဲ့ဖွံဖြိုးမူသည် သိသာစွာပြောင်းလဲလာသည်မှာ အဆီများ ၈%မှ ၂၁%ထိတိုးလာသောကြောင့်ပါ။ အဆိုပါအဆီများသည် မျိုးပွားမူအတွက်နှင့် ရာသီစက်ဝန်းအတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ (4)ရင်သားဖွံဖြိူးမူ အပျိုစဖြစ်သည်နှင့် … Read more
ဒီအရာတွေလုပ်မိရင် ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ်…..
ဒီအရာတွေလုပ်မိရင် ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ် (၁)အိပ်ယာနောက်ကျမှထခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့… (၂)မနက်ပိုင်းကို ရန်ဖြစ်တာ စကားများတာတွေမလုပ်ပါနဲ့… (၃)အိပ်ယာထထချင်း မျက်နှာအရင်တန်းသစ်ပါ အစားအရင်စားတာ အိမ်သာတန်းတက်တာ မလုပ်ပါနဲ့… (၄)ဘုရားအရင်ရှိခိုးပြီးမှ အလုပ်ကိုစလုပ်ပါ…. (၅)ပိုက်ဆံတွေကို ပြန့်နေအောင်ထားတာမျိုး လိပ်ထားတာတို့ ပစ်စလခက်မထားပါနဲ့…. (၆)စိတ်ထားကောင်းကောင်းထားပါ သူများကို အတင်းပြောတာ ပုတ်ခပ်တာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့… (၇)အနောက်အရပ် မြောက်အရပ်တွေကို ခေါင်းပေးပြီးမအိပ်မိပါစေနဲ့… (၈)ဖိနပ်အဟောင်းတွေ ထီးအပျက်တွေ နာရီအပျက်တွေ အိမ်မှာမထားပါနဲ့…. (၉)ပိုက်ဆံပေါ်မှာ ဘောပင်နဲ့ ဟိုခြစ်ဒီခြစ် မရေးပါနဲ့…. (၁၀)ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါးကိုလုံးဝ မပစ်မှားမိပါ​စေနဲ့ မစော်ကားမိပါ​စေ… (၁၁)တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်တော့ အသားငါးမစားပါနဲ့ သက်သက်လွတ်စားပါ…. (၁၂)အိပ်ယာထထချင်း ဖုန်းသုံးတာ ဖုန်းပြောတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ မျက်နှာအရင်သစ်ပါ…. (၁၃)မနက်ပိုင်း ဘယ်သူကိုမှငွေမ​ချေးပါနဲ့…. (၁၄)မနက်ပိုင်း အရက်သောက်တာ မလုပ်ရပါ…. (၁၅)ငွေတွေကို ဖိနပ်နဲ့ထိတာ ထမိန်နဲ့ထိတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့… ဒီအရာတွေကို လုပ်မိရင် … Read more
ချစ်သူကောင်လေး သင့်ကို ရိုးမသွားပဲ အမြဲသတိရနေစေချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ပါ… လူတစ်ယောက် အထူးသဖြင့် ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို လွမ်းနေ၊သ တိရနေတာမျိုးကို မလိုချင်တဲ့သူမရှိပါဘူး။တစ်ချို့ ကိစ္စတွေဟာ ဒီတိုင်း သမရိုးကျနည်းအတိုင်း သွားတာထက် နည်း နည်းလေးဉာဏ် များပေး ဖို့ လိုပါတယ်..။ သူ့ကိုယ့်အကြောင်း မစဉ်း စားပဲ မနေနိုင်ပဲ လွမ်းနေအောင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းတွေရှိပါတယ်နော်.. (၁) ငြင်းပါ…. လူတော်တော်များများက ခက်ခဲတာကိုမှ ပိုကြိုက်ပါတယ်။လူ တိုင်း ကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့အတူရှိချင်ကြသူတွေပါ။တွေ့မယ် ချိန်း လို က်တိုင်း ငေါက်ခနဲ ထထိုင်ပြီး ဖြစ်နေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့..၊ အမျိုး သမီးေ တာ်ေ တ်ာများများက ချစ်သူကချိန်းလိုက်ပြီဆိုရင် မအားတာေ တာင်မှ အချိန်ဇယားတွေကို ရွှေ့ပြီး တွေ့ဖို့ အရောက်သွားသူတွေပါ။ကိုယ်က … Read more
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဆိုတဲ့ ရာသီခွင် (၅) ခု…
ဒီတစ်ခေါက် ရာသီခွင်တို့ရဲ့ ကဏ္ဍမှာတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တစ်ဖက်သားအပေါ် ဆွဲဆောင်မှုပြင်းတတ်ကြတဲ့ ရာသီခွင်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ရာသီခွင်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဘယ်လိုမတူညီတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေကြသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် Aquarius: ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်နေ့ထိ Aquarius တွေကတော့ တစ်ဖက်သားကို ညှို့အားပြင်းတဲ့သွင်ပြင်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်တတ်ကြပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း ကောင်လေးတွေဆိုရင် သူတို့တွေကိုတွေ့တာနဲ့ တန်းကြွေတတ်ကြတာပေါ့။ Libra: စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့ထိ Libra တွေကတော့ fashion အမြင်လည်းရှိတဲ့အပြင် သူတို့မှာ လျှို့ဝှက်ဆန်ပြီး ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Libra မှန်ရင် ရုပ်လှလှ၊ မလှလှ တစ်ဖက်သားကို ဆွဲဆောင်မှန်းမသိ ဆွဲဆောင်နေတာမျိုးပါ။ Virgo: သြဂုတ်လ ၂၃ မှ … Read more